पूर्वी भारत र बङ्ग्लादेशमा अम्पन आँधीले लाखौँ मानिस प्रभावित | हिमालयन ट्रिबुन
HT २०७७ जेष्ठ ९, शुक्रबार १४:०७
पूर्वी भारत र बङ्ग्लादेशमा चक्रवात अम्पनले गरेको विध्वंशबाट लाखौँ मानिसहरू प्रभावित भएका छन् । अहिलेसम्म ८४ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । शक्तिशाली आँधीले घरहरू भत्काउनुका साथै विद्युत् आपूर्ति प्रणाली बिगारिदिएको छ । दुवै देशमा चक्रवातको सम्भावित मार्गमा पर्ने स्थानबाट लाखौँ मानिसहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो ।
तर कोभिड १९ महामारीका कारण स्थानान्तरण निकै कठिन भएको थियो । मानिसहरूबीच दूरी कायम राख्नुपर्ने भएकाले आश्रयस्थल व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या भएको थियो । धेरै मानिसले कोरोनाभाइरस सर्ने डरले आफ्नो घर छोड्न पनि नमानेको बताइन्छ । चक्रवात अम्पनको वेग १८५ किलोमिटर प्रतिघण्टासम्म थियो । त्यसबाट समुद्रमा पानीको सतह १५ फीटसम्म बढेको थियो । तर अहिले उक्त समुद्री आँधीको वेग घटेको छ ।
अम्पनलाई बङ्गालको खाडीमा सन् १९९९ पछि उत्पन्न भएका समुद्री आँधीमध्ये सर्वाधिक शक्तिशाली मानिएको छ । भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्यका तीनवटा जिल्लामा अम्पनले ठूलो विध्वंश गरेको छ ।
बाङ्ग्लादेशमा हजारौँ घरहरू भत्किएका छन् तथा तटीय क्षेत्रका धेरै गाउँहरू डुबानमा परेका छन् ।
भारत र बाङ्ग्लादेशमा फैलिएको सुन्दरवन्स क्षेत्र प्रभावित भएको छ । भारतको कोलकातामा पनि समुद्री आँधीले क्षति पुर्याएको छ। त्यहाँ सडकहरू जलमग्न भए र विद्युत् आपूर्ति घण्टौँसम्म अवरुद्ध भयो । राज्यकी मुख्य मन्त्री ममता बनर्जीले कोलकातामा कोभिड(१९ले भन्दा समुद्री आँधीले ठूलो क्षति पुर्याएको बताएकी छन् ।
Spread the love काठमाडौं । कोरोना महामारीको संकटसँग जुँधिरहेको बेला भारतका स्वास्थ्य मन्त्री डा. हर्षबर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन -WHO_ का अध्यक्ष चयन भएका छन् । ३४ सदस्यीय कार्यकारी बोर्डमा उनी अध्यक्ष चयन भएका हुन । आजैदेखि उनले आफ्नो पदभार सम्हालेका छन् । डा. हर्षबर्धनले जापानका हिरोकि नकतानिको ठाउँ लिएका छन् । १९४ देशको World Health […]
२०७८ बैशाख २९, बुधबार १५:०३
इटलीको भेसुभिअस पर्वतमा दुई हजार वर्ष पुरानो अस्तिपञ्जर फेला
२०७७ पुष ३, शुक्रबार ०३:५२
विश्वमा दुई करोड सात भन्दा बढी कोरोनाका सक्रिय संक्रमित
२०७७ कार्तिक २७, बिहीबार ०७:२५
आठ जना शिशु हत्याको अभियोगमा वेलायतका एक नर्स पक्राउ